Ukuqeqeshwa Kwemakethe Yedijithali | Martech Zone
Lo mbhalo wawusobondeni embonini yezentengiso yedijithali njengoba ubhadane lwasakazeka, ukukhahlazeka kwahlasela, futhi nomnotho watshintsha. Ngibhale ku-LinkedIn ngalezo zinsuku zokuqala ukuthi abathengisi babedinga ukucisha iNetflix futhi bazilungiselele izinselelo ezizayo. Abanye abantu bakwenzile… kodwa, ngeshwa iningi labo alikwenzanga lokho. Ukudilizwa kwabasebenzi kuyaqhubeka ukudabula iminyango yezokukhangisa ezweni lonke.
Ukumaketha kwedijithali kungumsebenzi othakazelisayo lapho ungathola khona abathengisi ababili abahlukene abanamakhono amakhono ahluke kakhulu. Omunye kungaba yisazi sokubeka uphawu esinekhono lokwenza ubuhlakani bokubuka nokuxhumana ngemikhiqizo noma izinsizakalo zenkampani ngempumelelo. Omunye kungaba uchwepheshe wezobuchwepheshe oqonda ama-analytics futhi okwazi ukwenza imikhankaso yokukhangisa yedijithali eqhuba imizamo yenkampani yokukhangisa. Ukuhlangana kwamakhono nesikhathi esimaphakathi sokusebenza ngakunye kwalokhu kungenzeka kungagudluki nakancane… kepha basenekhono emsebenzini wabo.
Uma ufuna ukukhulisa inani lakho enhlanganweni yakho yamanje noma uzilungiselele isikhundla sakho esilandelayo sokumaketha kwidijithali, ngincoma kakhulu ukuthi uzibandakanye noqeqesho oluthile lobuchwepheshe.
Uyini Umaka Wedijithali?
Ngokubona kwami, abathengisi abanedijithali abanethalente engake ngasebenza nabo banokuqonda okujulile kwezinye iziteshi ezisemqoka nabathakathi, kepha baqonde ngokuphelele indlela yokusebenzisa abanye kungenzeka ukuthi abanalo ikhono. Ngokwami, ngikholelwa ukuthi ubuchwepheshe bami bokufaka uphawu lokumaka, okuqukethwe, ukusesha, nokumaketha kwezenhlalo kungenze ngaba ngumakethi wedijithali ophumelelayo eminyakeni edlule.
Indawo eyodwa engingazenzi ngathi nginolwazi kuyo ukukhangisa futhi ubuchwepheshe bokukhangisa. Ngiyabuqonda ubunzima kodwa ngiyabona ukuthi ijika lokufunda lokwakha ubuchwepheshe bami linzima kakhulu kulesi sigaba somsebenzi wami. Ngakho-ke, lapho ngidinga izinsiza zokukhangisa, ngixhumana nozakwethu abasebenza usuku nosuku kulezi zindlela nsuku zonke.
Lokho kusho… Ngisadinga ukuqonda ukuthi ngikusebenzisa kanjani futhi nini ukukhangisa njengengxenye yecebo lokumaketha ledijithali jikelele. Futhi lokho kudinga ukuqeqeshwa kokumaketha kwedijithali. Kungamangaza iningi lenu, kepha ngihlala ngithatha izifundo, ngiya kuma-webinar, futhi ngidla okuqukethwe ukuzama ukuhlala phambili. Le mboni ihamba ngokushesha futhi kufanele unikele isikhathi sokuhlala phezulu.
Ungaba Kanjani Umaki Wedijithali
Ngohlelo lwe-Udacity's nanodegree, ababekhona bangathola ukubuka konke okuyisisekelo kwakho konke okudingekayo ukuze babe ngabakhangisi be-digital abaphumelelayo. Bazofunda ukudala okuqukethwe kokumaketha, basebenzise imithombo yezokuxhumana ukukhulisa umyalezo wakho, benze okuqukethwe kutholakale oseshweni, baqhube imikhankaso yezikhangiso futhi bakhangise ku-Facebook. Ngokwengeziwe, funda ukuthi izikhangiso zokubonisa nezamavidiyo zisebenza kanjani nokuthi ungamaketha kanjani nge-imeyili, futhi ulinganise futhi uthuthukise nge-Google Analytics.
Ukuqeqeshwa Kwemakethe Yedijithali kusuka ku-Udacity
Izifundo zithatha cishe izinyanga ezintathu uma unikela ngamahora ayi-3 ngesonto futhi kufaka:
Izisekelo Zokumaketha - Kulesi sifundo, sikunikeza uhlaka lokusiza ukuhlela nokuhlela indlela yakho yokumaketha. Sikwethulela futhi ezinkampanini ezintathu ezivezwe kulo lonke uhlelo lweDigital Marketing Nanodegree njengezibonelo zokuthi ungakusebenzisa kanjani okufundayo kuzimo zombili ze-B2C ne-B2B.
Isu Lokumaketha Lokuqukethwe - Okuqukethwe kungumongo wawo wonke umsebenzi wokumaketha. Kulesi sifundo, ufunda ukuhlela ukuhlela ukumaketha kwakho kokuqukethwe, ukuthi ungakuthuthukisa kanjani okuqukethwe okusebenzela kahle izethameli zakho ezihlosiwe, nokuthi ungalinganisa kanjani umthelela wakho.
Social Media Marketing - Imithombo yezokuxhumana iyisiteshi esinamandla sabakhangisi. Kulesi sifundo, ufunda kabanzi ngamapulatifomu amakhulu ezokuxhumana nabantu, ukuthi ungakuphatha kanjani ukutholakala kwakho kwezokuxhumana nabantu, nokuthi ungakwakha kanjani okuqukethwe okusebenzayo kwepulatifomu ngayinye.
Ukukhangiswa Kwezindaba Zenhlalo - Ukusika umsindo ezinkundleni zokuxhumana kungaba yinselele, futhi imvamisa, abathengisi kumele basebenzise amasu wokukhangisa ezokuxhum akhokhelwayo ukukhulisa umyalezo wabo. Kulesi sifundo, ufunda ngamathuba wokukhangisa okuhlosiwe ezinkundleni zokuxhumana nokuthi ungayenza kanjani imikhankaso yokukhangisa ehambelana nezithameli zakho.
Injini Yokusesha (SEO) - Izinjini zokusesha ziyingxenye ebalulekile yesipiliyoni esiku-inthanethi. Funda ukuthi ungakwandisa kanjani ukutholakala kwe-injini yakho yokusesha ngokusebenzisa imisebenzi esesizeni nengekho kusayithi, kufaka phakathi ukuthi ungalukhulisa kanjani uhlu lwakho lwamagama asemqoka, usebenzise i-UX kuwebhusayithi yakho nokuklama kwakho, futhi usebenzise umkhankaso wokwakha isixhumanisi.
Ukumaketha Kwenjini Yokusesha Nezikhangiso zeGoogle - Ukwandisa ukubonakala emiphumeleni yenjini yokusesha kuyingxenye ebalulekile yokumaketha kwedijithali. Ukuqinisa ukutholakala ngokusebenzisa i-Search Engine Marketing (SEM) kuyindlela esebenzayo yokufeza izinhloso zakho zokumaketha. Kulesi sifundo, ufunda ukuthi ungawakha kanjani, uwenze kanjani futhi uwusebenzise kanjani umkhankaso osebenzayo wesikhangiso usebenzisa i-Google Ads.
Bonisa ukukhangisa - Ukukhangisa kokubonisa kuyithuluzi elinamandla lokumaketha, eliqiniswa ngamapulatifomu amasha afana neselula, amathuba amasha wevidiyo, nokukhomba okuthuthukisiwe. Kulesi sifundo, ufunda ukuthi ukukhangisa okubonisa kusebenza kanjani, ukuthi kuthengwa futhi kuthengiswa kanjani (kufaka phakathi indawo yohlelo), nokuthi ungasetha kanjani umkhankaso wokukhangisa wokubonisa usebenzisa i-Google Ads.
imeyili Marketing - I-imeyili iyisiteshi sokumaketha esisebenza kahle, ikakhulukazi esigabeni sokuguqulwa nokugcinwa sohambo lwamakhasimende. Kulesi sifundo, ufunda ukuthi ungakha kanjani isu lokuthengisa nge-imeyili, udale futhi usebenzise imikhankaso ye-imeyili, futhi ulinganise imiphumela.
Linganisa futhi ulungiselele nge-Google Analytics - Izenzo ezenziwa ku-inthanethi zingalandelelwa, kanjalo nomphumela wemizamo yakho yokumaketha yedijithali. Kulesi sifundo, ufunda ukusebenzisa i-Google Analytics ukuhlola izithameli zakho, ukukala impumelelo yemizamo yakho yokutholwa nokuzibandakanya, ukuhlola ukuguqulwa komsebenzisi wakho kuya ezinhlosweni zakho, bese usebenzisa leyo mininingwane ukuhlela nokwenza ngcono amabhajethi akho wokumaketha.
Udacity's umakethi wedijithali inkambo ifaka amaphrojekthi wangempela avela kochwepheshe bemboni nokuqukethwe okugxilisiwe okwakhiwe ngokubambisana nezinkampani ezisezingeni eliphakeme.
Abeluleki babo abanolwazi baqondisa ukufunda kwakho futhi bagxile ekuphenduleni imibuzo yakho, bakukhuthaze, futhi bakugcine usendleleni. Uzokwazi ukufinyelela ekusekeleni kabusha, ukubuyekezwa kwephothifoliyo yeGithub, kanye nokwenza kahle kwephrofayili ye-LinkedIn ukukusiza uqhubekisele phambili umsebenzi wakho futhi uthole indima ekhokha kakhulu.
Yakha uhlelo lokuzivumelanisa nezimo olwenzelwe ukulingana impilo yakho ematasa. Funda ngejubane lakho bese ufinyelela imigomo yakho uqobo kusheduli ekusebenzela kangcono.
Yiba Umaka Wedijithali
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene nohlelo lwe-Udacity's Digital Marketer Program.
Tags: ukuqeqeshwa kokuqukethwe kokumakethaumakethi wedijithaliukuqeqeshwa kwezimakethe zedijithaliukudayiswa kwe-digitalukuqeqeshwa kokumaketha kwedijithalikhombisa ukuqeqeshwa kokukhangisaindandathoukuqeqeshwa kwezentengiso nge-imeyiliukuqeqeshwa kwe-google analyticsizisekelo zokumakethaukuqeqeshwa okuyisisekelo kokumakethananodegreeukuqeqeshwa kwe-inthanethiukuqeqeshwa kwezinjini zokuseshaukuqeqeshwa kwe-injini yokuseshaseo ukuqeqeshwaukuqeqeshwa kokukhangisa ezinkundleni zokuxhumanaukuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezokuxhumanaudacity